Real Madrid oo shuruud ku xirtay Sergio Ramos si ay qandaraaska ugu kordhiso – Gool FM
Dajiye January 1, 2020
(Madrid) 01 Jan 2020 Kooxda Real Madrid ayaa dooneysa inay cusbooneysiiso qandaraaska kabtankeeda Sergio Ramos xilliyada soo socda, si ay ugu sii heystaan garoonka Santiago Bernabéu, ilaa iyo uu kaga fariisanayo xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta.
Shabakada “Defensa Central” ee dalka Spain oo si aad ah ugu dhow Los Blancos ayaa waxay shaaca ka qaaday in Real Madrid ay shuruudo miiska u saartay Sergio Ramos si uu u ogolaado fikrada uu ku saxiixayo heshiis cusub.
Los Blancos ayaa soo dhaweyneysa fikradda uu ku sii wadan karo Sergio Ramos kooxda Real Madrid, laakiin waxay shuruud kaga dhigtay inuusan kor u qaadin mushaarkiisa heshiiska cusub.
Real Madrid ayaan wax dood ah ka qabin inay qandaraaska u kordhiso Sergio Ramos, laakiin waa haddii uu ku qaadanayo mushaarka uu haatan ka qaato kooxda.
Sergio Ramos ayaa mushaarka uu haatan ka qaato kooxda Real Madrid wuxuu gaarsiisan yahay 15 milyan euro, marka laga hadlayo waxqabadka iyo qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay in xiddiga uu kula guuleysto kooxda.